Sintomy ny rindrina vaovao an'ny Samsung Galaxy S10 | Androidsis
Amin'ny 20 Febroary, ny orinasa hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny Samsung Galaxy S10 vaovao ary ny karazany hafa, terminal misy ny chaebol Ny Samsung Koreana dia mankalaza ny fahafolo taona ary fantatsika mazava tsara ny famaritana sy ny endriny rehetra, ka vitsy ny tsy ampoizina horaisin'ireo mpanatrika izay manana fotoana hanatrehana izany.
Toy ny mahazatra, andro maromaro alohan'ny fampisehoana amin'ny fomba ofisialy ny terminal vaovao, azontsika atao ankafizo ny iray amin'ireo sary an-tsary hafa izay ho avy amin'ny tanan'ity terminal ity. I Ice Universe indray no namoaka tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter azy ilay vola vaovao hanombohan'ny Galaxy S10.
Raha te hampidina ny sary tany am-boalohany an'ity rindrambaiko vaovao ity ianao dia afaka manao azy mivantana amin'ny fipihana ny sary kely izay ho hitanao amin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Rehefa tsindrio eo io dia tsy maintsy mitady ilay safidy Ampidino ny habeny tany am-boalohany hahafahana misintona ny sary amin'ny famahana azo, 2048 × 996, vahaolana mety tsy ho famaranana io, fa io no akaiky indrindra azontsika ananana amin'izao fotoana izao raha toa ka efa maniry ny hankafy ny iray amin'ireo sary mivoaka avy amin'ny tanan'ny Galaxy S10 isika.
Raha tsy hoe tsy ampoizina ho antsika ny andro fampisehoana, ny S10 dia ho hita amin'ny kinova telo, kinova telo misy habe efijery sy fampisehoana samihafa. Ny Galaxy S10e no ho fitaovana fidirana amin'ity faritra ity, fitaovana hanandrana hampihena ny vidiny, dia hanana ny sensor fantsom-baravarana eo anilany, fa tsy eo ambanin'ny efijery toa ny S10 sy S10 Plus. Ankoatr'izay, any aoriana dia hanana fakantsary roa fotsiny ho an'ny 3 sy 4 izay hananan'ny S10 sy S10 Plus.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Sintomy ny rindrina vaovao an'ny Samsung Galaxy S10 manaraka
Navoaka tamin'ny horonan-tsary ny famolavolana ny Motorola RAZR azo nakambana